यौन जिज्ञासा Archives - Page2of 66 - Sawal Nepal
विवाहको पहिलो रात, जसलाई बोलीचालीको भाषामा सुहाग रात पनि भनिन्छ । जसको मतलव गुवावले सजिएको विस्तरा तथा नवविवाहित जोडीबीचको शारीरिक सम्पर्क मात्रै हुँदैन । यसको अतिरिक्त अरु पनि धेरै हुन्छ सुहाग रातमा, जसलाई केही हिन्दु महिलाले यसरी वर्णन गरेका छन्, ब्युँझिने पो हुन् कि ? यो स्थिति मेरा लागि अजीब प्रकारको थियो । किनकी मेरा
काठमाडौं । आजभोली इन्टनेटमा मानिसहरु बिभिन्न तरिका अपनाएर एडल्ट भिडियो खोज्ने गर्दछन् । यो भिडियो धेरैजसो युवा पुस्ताहरुले नै खोज्ने गर्दछन् । सरकारले यस प्रकारका साइटहरु बन्द गरेपनि बिभिन्न तरिकाहरु अपनाएर यस प्रकारका भिडियोहरु हेर्नेको संख्या भने कम छैन । एक व्यक्ति घरमा अनलाइन एडल्ट फिल्म हेरिरहेका थिए । जब उनले त्यो फिल्म हर्ने क्रममा फिल्ममा
म २८ वर्षकी भएँ । विवाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ । यौनसम्पर्क गर्दा श्रीमान्ले जब वीर्य योनिमै झार्नु हुन्छ तब लिङ्ग बाहिर निकाल्दा सबै वीर्य बाहिरै आउँछ, किन होला ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्रीमान्ले योनिमा झारेको वीर्य बाहिर नआए मोटाइन्छ रे, के यो सत्य हो ? गर्भनिरोधक उपाय जस्तै
एजेन्सी / पैसा र यौन जीवनका विषयमा अहिले संसारका धेरै देशमा अध्ययन भैरहेको छ । विभिन्न प्रकारका अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने यौन जीवनसँग पैसा र पैसासँग यौन जीवन जोडिएको देखिन्छ । पैसाको दबाबले यौन जीवनलाई असर गरेपछि व्यक्तीको वैवाहिक जीवनमा पनि असर देखिन्छ । त्यसैले अनुसन्धानकर्ताले पैसा वा प्रेम मध्ये एक रोज्न सल्लाह
काठमाडौं– प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीबीचको सम्बन्धलाई राम्रो र सुमधुर बनाउने एउटा माध्य सहवास वा यौन क्रियाकलाप हो । पार्टनर आफूहरुबीचको यौन कर्म लामोसमय होस् भन्ने चाहने विभिन्न अध्यननहरुले समेत देखाएको छ । यौन क्रियाको आनन्दको लम्बाई तपाईं आफू र पार्टनरमा भर पर्ने कुरा हो । हुन त यस्तो लामो समय टिक्ने कुरा पोर्न हेरेर
एजेन्सी । ‘कामसुत्र’का रचयिता वात्स्यायनभन्दा सयौँ वर्ष अघि ग्रीक साहित्यमा यौनको अवधारणामाथि व्यापाक वहस भएको थियो । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले यौनलाई ‘अरुमाथि अधिकार जमाउने आकाङ्क्षा’ भनेका छन् । ग्रीक नाटककार अरिस्टोफैन्सले ‘सिम्पोजियम’मा एउटा यस्तो समयको उल्लेख गरेका थिए जब मानव जगत आफैमा परिपूर्ण हुने गथ्र्यो र उसलाई अरु कसैको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । यसको परिणाम मानिसहरु
पत्नीको चाहाना राखेपछि पतिले गरे यस्तो हर्कत
भारतको गुजरातमा रहेको अहमदाबादमा एक पतिले आफ्नी पत्नीबाट रतिसुखको माग आएपछि कुटपिट गरेका छन् । आफूले संन्यास लिइसकेको भनी पतिले दाबी गरेका छन् । पतिका आमाबुवाले यो कुरा थाहा पाएपछि बुहारीलाई कुटपिट गरेको बताइएको छ । पीडित पत्नीले महिला प्रहरी थानामा आफ्ना पति र सासूससुराविरुद्ध घरेलु हिंसा कानून अन्तर्गत उजुरी दिएकी छन् । ती महिलाले बताएअनुसार,
काठमाडौं । शारीरिक सम्बन्धका विभिन्न तरिकाका बारे धेरै थरि बहस हुन्छ । यीनै बहसहरु मध्ये पछिल्लो पछिल्लो समय चर्चा सुरु भएको छ तान्त्रिक यौन सम्पर्कको । केही अनुसन्धानले तान्त्रिक यौन सम्बन्धमा सहभागी जोडीले भरपुर सन्तुष्टि पाउने उल्लेख छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार युवाहरु तान्त्रिक यौन सम्बन्धमा आकर्षित हुन थालेका छन् । के हो तान्त्रिक यौन
महिलाहरु किन अपरिचित पुरुषसंग उ’त्तेजि’त हुन्छन् , थाहा पाउनुहोस
ऐजेन्सी । शा’रिरक सम्ब’न्धलाई राम्रो विचारले सोचे राम्रै हुन्छ । नराम्रो विचारले सोचे नराम्रो हुन्छ जब शा’रिरक सम्ब’न्धलाई नराम्रो बिचारले हेर्ने गरिन्छ । तब शारिरक सम्बन्ध जतिको घृणित कुरा केहि नहुने अध्ययनहरुले देखाउँदै आएका छन् । यस बिषयमा भन्नु पर्दा नारीहरु लजालु र जाली पनि हुने गर्दछन् भन्ने निष्कर्ष अध्यनहरुले बताएका छन् । प्राय स्त्रीले